Dhabar Xanuun (Back Pain) | Berberanews.com
Home CAAFIMAAD Dhabar Xanuun (Back Pain)
dhinaca kore ee jirka (ee lagu daray culayska dheeriga ah ee uu sido) waxuuna yahay mid ku jiro hawl aan kala goâ€™ lahayn gaar ahaan markii la rogmanaayo, la jeedjeedinaayo iyo markii wax la qaadaayo.
Waxuu dhismaha isku jiro ee dhinaca hoose dhabarka la micno yahay haddii wax yar oo dhaawac ah gaaro wax kasto ka mid ah dhismaha dhabarka inuu keeni karo xanuun aad u badan iyo raaxo laâ€™aan. Xanuunka dhinaca hoose ee dhabarka waa astaanta inuu jiro murugo u keentay dhaawac xirgaha, murqaha, xirgaha fiibarka ama saxuunta (discs).
Inta badan dhabar xanuunka hooseeyo waxaa loogu yeeraay sida â€˜ mid aan lahayn meel gaar u ahâ€™ sababta oo ah inuu keenay dhaawac ama cudur aan aad u darnayn, laakin ay keeneen laabniin, murqaha oo aadkaadaan, dhaawacyo yar-yar ama jirka oo meel qabsaday ama dhimirka ay wax yar gaaray. Waxaa kale uu ku dhici karaa markii uu jiro uur, ama sabab murugo leh, bukasho, bukashada kilyaha ama hurdo xumi.
Waxaa sidaan loo yaqaanaa caadi ahaan sida saxanka â€˜ saxanka taranturoodayâ€™ laakin waxaa si aad ah oo sax ah loo tilmaamaa inuu
yahay sida â€˜ horay u fakadayâ€™ (bararid ) ama â€˜ herniatedâ€™ ( murqacday); dhusha saxanka ayaa wax ka soo daâ€™aayo intii oo waxa soo soconaayo ayaa keenaayo dhabar xanuunka
Sida caadiga ah saxanka wuu gurmaa waxuuna la qayirmaa daâ€™da. Ama waxuu daba socdaa dhaawaca. Waxuuna sidaa ku keenayaa inay saxuunta ay yareeyaan tanaasulka, ay waxtar yar u yeeshaan inay jiifiyaan xaroorka, sidaasi darteedna inay guud ahaan keenaan adeeg
Waxa lagu ogaaday baarista
Waxa lagu ogaado baarista lagu sameeyaa astaamaha iyo baarista jirka. Markii laga shakisanyahay dhibaatooyinka saxuunta waxaa la sameeyaa x-ray, skaanka tomogarafiyada ee la mariyay computer-ka (Skaanka CT ama Cat), ama skaanka ee dhawaaqa birqabadka (MRI) ayaa lagu talin karaa si loo helo warar sax ah.
â€¢ Isticmaalka xunuun-dilayaasha;
â€¢ Isticmaalka daawooyinka ka hortagga holaca iyo xanuun-dilayaasha (marka koowaad kala tasho farmashiistaha ama Takhtarka Guud);
â€¢ Sii wadidda waxqabadyada caadiga ah halka ay ka suurto gasho;
â€¢ Daawaynta osteopath-ka, chiropractor-ka, jir-jimciyaha, amacirbad-durid adeegsadaha ee ah xirfadlayaal ayaa kaa caawini karaan, waxay kale ay daraasaadka muujiyeen in talada ah in la raaco waxqabadka inay u tahay waxtar jirdhismeedka xanuunka fudud;
â€¢ Sii wad shaqada, ama si degdeg ah uga soo laabo haddii ay suurto gal tahay;
â€¢ Waxaa fiican inaad ku nasatid sariirta in aan ka badnayn labo maalin, in ka bdan waxay keeni kartaa waxtar xumo;
â€¢ Sameey layliga jimicsiga si loo xoojiyo murqaha iyo si loo simo dhinacyada;
â€¢ Isticmaal kuleel (warqad kulul ama qubays kulul) ka dib maalmo markii uu dabco xanuunka murqaha;
â€¢ Waxaa ku caawini karo qalabka ah ultrasound (kumbuyuutarka) si loo yareeyo holaca.
Mar mar aad u darran waxaa loo baahanaa qalliin ah sida microdiscectomy, oo keenaayo in la dayacatiro meesha quran tahay ama saxanka murqacday, ayaa lagu talin karaa.
Si uusan kuu qaban dhabar xanuunka waa inaad yaraysaa murugada saaâ€™idka ah iyo dhibaatada dhabarkaada, aadna sugtaa inuu dhabarkaada noqdo mid xoog iyo fudeed leh. Waxaa kale lagu dabaqayaa talada dhabar xanuunka joogtada ah, lehna dhacdooyinka
â€¢ yareey culayska saaâ€™idka ah,
â€¢ Sameey layliga jirdhiska si aad u sii hagaajisid dhabarkaada iyo murqaha calooshaada,
â€¢ U sin si fiican dhinacyada jirkaada,
â€¢ Ku seexo sariir iyo joodari fiican,
â€¢ Sax qaadista iyo gacan ku qabadka alaabaha,
â€¢ Weecashada adkaynta iyo isgalka muruqa ee kediska ah
â€¢ Isku day oo yareey murugada, lab-lakaca iyo kacsanaanta
â€¢ Sameey jimicsi joogto ah (socod ama dabaalasho waxay u fiican yahiin kuwa qabo dhabar xanuunka).
Previous articleSOMALILAND WAXAY SAYLED UTAHAY DHULKA SOMALIDU DEGTO
Next articleInfekshanka Bartamaha Dhegta
Qofkii labaad oo ka dawoobay HIV